Daraasad: Niyad jab iyo walwal ayaa laga yaabaa inay ka sarreeyaan dadka qaba cilladda isticmaalka cannabis (CUD) • Dawooyinka Inc.eu
Daraasad ayaa dhowaan lagu daabacay Joornaalka Cilladaha Cudurrada leh, ee baaray daraasadaha faafa ee la daabacay Janaayo 1980 ilaa July 2020.
Dib u eegis lagu sameeyay daraasadaha faafa ee la daabacay intii u dhaxeysay Janaayo 1980 iyo Julaay 2020 ayaa lagu ogaaday in niyadjabka iyo dhibaatooyinka guud ee walwalka (GAD) laga yaabo inay ka sarreeyaan shakhsiyaadka qaba cilladda isticmaalka cannabis (CUD).
Dib u eegista waxaa hogaamineysay Vivian N. Onaemo, oo u shaqeysa Waaxda Caafimaadka Kanada (Saskatchewan). Onaemo iyo asxaabtiisuba waxay falanqeeyeen xogta daraasadaha laga sameeyay ugu horeyntii Mareykanka iyo Australia.
Fursadaha niyadjabka oo ka sarreeya cilladda isticmaalka xashiishadda
Daraasaddan, oo lagu daabacay Joornaalka Cilladaha Cudurrada leh, ayaa lagu ogaaday in halista niyad-jabka weyn uu 3,22 jeer ka sarreeyo shakhsiyaadka qaba CUD, halka heerka GAS uu ka sarreeyay 2,99 jeer.
Fursadaha niyad-jabka oo ka sarreeya cilladda isticmaalka cannabis (afb)
Cilmibaaraha Onaemo iyo asxaabtiisuba waxay xusayaan in dadka qaarkood ee qaba diiqad ama walwal ay iskood iskaga daaweyn karaan xashiishadda iyo u nuglaanshaha hidde ama deegaanka ayaa laga yaabaa inay dadka qaar u horseeddo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo dhibaatooyinka isticmaalka mukhaadaraadka.
Iyadoo aan loo eegin dariiqa u horseedaya xaalad-wada-jirrada iyo baahsanaanta badan ee is-qaadsiinta, waxay u muuqataa in mar haddii uu qofku yeesho CUD iyo niyad jab ama walaac, wareeg wareeg ah ayaa ka ciyaari kara taas oo xaalad kasta ay ku sii socoto ama uga sii darto si sax ah. kale ”, ayay cilmi-baarayaashu qoreen.
Cilmi baarayaashu waxay soo gabagabeeyeen "hirgelinta waxqabadyada siyaasadeed ee ku saleysan caddaynta ee wax ku oolka ah, maareynta isku dhafan ee CUD-yada cudurada maskaxda leh ayaa gacan ka geysan kara natiijooyinka bukaanka ee wanaagsan."
Daraasado kale ayaa muujiyay in dadka qaba niyad-jabka ay u cunaan xashiishka saameynteeda ka-hortagga diiqadda si ay u horumariyaan caafimaadkooda caafimaadka iyo xaalad maskaxeed.
Daraasad 2020 lagu daabacay Yale Journal of Biology iyo Medicine, ayaa muujisay in "boqolkiiba 95,8 ee adeegsadayaashu ay la kulmeen astaamo yareyn ka dib isticmaalkooda iyadoo celcelis ahaan hoos u dhac ku yimid astaamaha xoogga ee -3,76 dhibcaha miisaanka analogga 0-10 ee muuqaalka ah."
Ilaha waxaa ka mid ah PsychicricNews (EN), ScienceDirect (EN), TheGrowthOP (EN)